२०७५ सालको भाद्र महिनाको राशीफल - Darpanpost
» राशिफल अंक: 11197
२०७५ सालको भाद्र महिनाको राशीफल
Darpanpost शुक्रबार, भाद्र ०१, २०७५ मा प्रकाशित
मेष – व्यापारमा लाभमिल्ने योग रहेको छ । धार्मिकस्थलको यात्रा हुनुका साथै , घरपरिवारको कारण मानसिक तनावहरु आउने छ , विश्वास पात्रबाट घातहुने भएको हुँदा होसियारीका साथ काम गर्नुहोला शैक्षिकप्रगति हुनेछ । सानातिना दुर्घटनाहुनेछ , जागिरबाट मानसम्मानप्राप्त मिल्नेछ । , आर्थिक सुधार हुने , पराक्रममा बृद्धि तथा साँस्कृतिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । यो महिनाका लागी शुभ अक.,८ हरियो रग. ,उत्तर दिशा शुभरहेको छ ।
बृष – पारिवारिक काम काजले तनाव हुने छ । आँखाको समस्या आउन सक्छ । कृषिबाट फाइदा मिल्ने छ । यात्रामा कष्टहुने छ ,परिवारका सदस्यनै विरोधी हुने हुँदा होसियारीमा काम गर्नु होला शत्रुपक्ष पराजित हुने छन् । विद्याआर्जमा कमी माया प्रेमकोप्रसंग मात्र चल्ने छ । शुभअकं १ ,३ , पश्चिम दिशा र सेतो रगं शुभरहेको छ ।
मिथुन – भविष्यको चिन्ताको साथ साथै मानप्रतिष्ठामा आँच आउने छ । जागिरमा असन्तुष्टिमिल्ने छ । परिश्रमधेरै गरेपनि सफलता मिल्ने छैन् ,नराम्रो कर्ममा मनजाने छ , बोलिमा विचार पुराउनुहोला ,व्यापारमा नोक्सानी हुनेछ , विरोधीहरु सक्रिय हुनेछन् जग्गा जमिनको कारोबारमा फाईदा मिल्नेछ । रोकिएको धन सम्पत्ति मिल्नेछ । यो महिनाको लागी शुभअकं ५ मिश्रीत रगं र पश्चिम दिशा शुभरहेको छ ।
कर्कट – यात्रा रमाईलो तथा शैक्षिक प्रगति हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार एवं प्रेमप्रसङ्ग आऊनुका साथै परीवारबाट नै असमती आउने योग छ बिचार पुराएर काम गर्नुहोला । व्यापारमा प्रगति तथा नयाँ कामको सुरुवात हुनेछ । जिम्बेवारीको काममा शत्रुलाग्नेछन् । बोलिलाई नियन्त्रण गर्नु होला , यो महिनाका लागी शुभ अकं २, ६ निलो रगं र पुर्वदिशा शुभरहेको छ ।
सिंह – खर्चमा वृद्घि भएता पनि आम्दानीले पुरा गराउने छ भोजभतेरमा सहभागी हुनु पर्ने छ । प्रेम प्रस्ताव तथा पुनर्मिलनको प्रस्तावआउन सक्छ ,अचलसम्पत्तिको दुरपयोग,मिष्ठान्न परिकारको प्राप्ती हुनुका साथै इष्टमित्रहरुले तपाईबाट फाइदालिने छन् । बैदेशिक कामकाजको लागी दौडधुपमात्र हुनेछ । यो महिनाका लागी शुभअकं ९ खैरोरगं ,दक्षिण दिशा शुभरहेको छ ।
कन्या – भविष्यको चिन्ता तथा मनमा संका आउने योग रहेको छ ,अन्यव्यक्तिको मन जित्न समय एवं धेरै परिश्रम गर्नु पर्ने छ । शैक्षिकस्तरमा परिर्वतन साथीभाईको कारण यात्रामा कठिन हुनेछ । दाम्पत्य जिवनमा अरुको कारण बिवाद आउन सक्छ । मावली तथा ससुरालीको कारण अपमान हुनुपर्ला यो महिनाको लागी शुभअकं ,३ कालो रगं उत्तर दिशा शुभहुनेछ ।
तुला – कार्यमा केहि बाधा आउन सक्छ , धेरै दौड्भागको काम हुने छ । पशुचौपायबाट खासै फाइदा नभएपनि व्यापरमा लाभ मिल्नेछ । राज्यस्तरबाट सहयोग मिल्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिसँग भेटघाट हुनुकासथै बैदेशिक यात्राको समय आएको छ । पे्रमप्रस्ताव तथा नयाँ साथी बन्ने योग रहेकोछ । यो महिनाको लागी शुभ अकं २ शुभ रगं निलो पश्चिम दिशा शुभरहेको छ । ध
बृश्चिक — बिनाकारण सामाजिक जिम्बेवारीहुनेछ । सन्तानले कष्टदिनेछन् । आम्दानीमा कमी , वैदेशिकयात्रा नराम्रो हुनेछ । धेरै योजनाहरु बन्नेछन् तर सफल हुने छैन् । परिवारले साथदिने छैनन् । शत्रु पक्षबाट होसियारी हुनुहोला , कमिशन युक्त कार्यमा सहभागी मात्र हुनेछ । शुभ अक. ४ , पहेलो रगं एवं दक्षिण दिशा शुभरहेको छ ।
धनु – ऋणमा वृद्धि हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्रमा अवरोध आउनेछ । पारिवारीक अशान्ति तथा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । यात्रामा रमाइलो हुनुका साथै शैक्षिकपक्ष सवल रहेको छ । पैतृक सम्पतिको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेकोछ । खानपिनमा बिचार पुराउनुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । यो महिनाका लागी शुभअकं ९ शुभ रगं रातो पश्चिम दिशा शुभरहेको छ ।
मकर — दाम्पत्य जिवनमा बिवाद हुनेछ । शैक्षिक स्तरमा सफलता हुनेछ । राज्नीतिमा खासैराम्रो छैन् ,स्मरण शक्तिमा कमि आउने छ । गृहेणीहरुले घरपरिवारको सेवामा व्यस्त हुनुपर्ने छ ,औद्योगिक कार्य र निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुनेछ , व्यापारमा भने लाभ मिल्नेछ । खरिदबिक्रको समय आएको छ । यो महिनाका लागी शुभ अकं ३ , रगं रातो पश्चिम दिशा शुभरहेको छ ।
कुम्भ — शारीरिक पीडा आउने छ । नयाँकामको सु्रुवात हुने छ । व्यापारमा सफलता, शैक्षिक प्रगति,लाभदायिकयात्रा एवं पारिवारीक समस्या आउन सक्छ । मित्रहरुबाट नै धोखा हुने हुदाँ होसियार हुनु होला । बोलिको प्रभावले महत्वपूर्ण काम सम्पन्न हुने छ । यो महिनाका लागी शुभअकं ७ , निलोरगं ,दक्षिण दिशा शुभरहेको छ ।
मिन — पशुचौपायबाट फाइदा मिल्नेछ । स्थान परिवर्तन तथा जागिर ,व्यवसायमा राम्रो हुनेछ । आत्मबल बढेर जाने एवं बैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रै हुने छ । शैक्षिक मार्ग मजबुत बन्ने मित्रता प्रेममा परिवर्तन हुने छ । घरपरिवारले कुरा काट्ने छन् । संगित तथा कलासाहित्यको क्षेत्रमा सफल्ता मिल्नेछ । बैदेशिह यात्राको लागी परिश्रम गर्नु पर्ला यो महिनाका लागी शुभ अक. , ४ सेतोरगं , पुर्वदिशा शुभरहेको छ ।